ဧရာညီနောင်: Laptop ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင်သိထားသင့်တာလေးတွေ
သူအမျိုးအစားနဲ့သူ ပါးတာထူတာတွေ heat ခံနိုင်တာတွေ မခံနိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်.......Lenovo ကတော့
heat တော်တော်တက်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်..... အဲ့တော့ Lenovo ကိုတော့ ဝေးဝေးကရှောင်နယ်သားရေမြန်မာပြည်ကအပူချိန်နဲ့ဆိုရင် ပိုပြီးဆိုးလိမ့်မယ်........ အဲ့တော့ ကျန်တဲ့အမျိုးအစားတွေစဉ်းစားကြရအောင်နော်......acer,asus,dell ဒီအမျိုးအစားတွေကတော့ မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်...........ဘာလို့လည်းဆိုတော့အသုံးပြုရတာလည်းမာတယ်ပြောလောက်အောင်
လည်းသိပ်မထူးဘူးနော်.......အများအားဖြင့်တော့ ထူတဲ့အမျိုးအစားတွေက heat တက်တာများပါတယ်.....ကျန်တဲ့အမျိုးအစား တွေဖြစ်တဲ့ eMachines,HP,Samsung သူတို့ ကတော့
သုံးရတာတော့ မာပါတယ်.....ဒါပေမယ့် heat တော့တက်တယ်.....နောက်ဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ စူပါစတား sony ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ.....ဈေးကလည်းသူများတွေထက်သာတယ်........Toshiba ကလည်း heat တက်တယ် အကြမ်းမခံပြန်ဘူးဗျ ဒီဇိုင်းလေးကတော့ လှတယ်...... မြန်မာပြညန်မှာအသုံးများတာတွေကတော့ acer,asus,dell တွေပဲ......ဒီတော့နယ်သားရေ မြန်မာပြည်မှာမှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သူဒေသနဲ့လိုက်မယ့် အမျိုးအစားပဲဝယ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်.......ကွန်ပျူတာ ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် လက်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်destop ပဲဖြစ်ဖြစ် hardware ပိုင်း မှာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကိုက်ညီဖို့အရေးကြီးပါတယ်.....ကျွန်တော်ကတော့ Processor,System Memory,Graphics အဲ့ (3) ခုကိုတော့ စိတ်ကြိုက်ရွေးပါတယ်...... ကျန်တဲ့ Hard Drive , Media Card Reader တို့ဆိုတာက တော့ အရန်သဘောလောက်ပဲသဘောထားပါတယ်.......။ အောက်က hardware ကိုရှင်းတဲ့အပိုင်းကိုတော့ ကိုဖိုးသား ဆိုဒ်က ရှင်းထားတာလေးကို ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါမယ်နော်........
• 2.2GHz Intel Pentium Dual Core T4400 Processor (1MB cache, 800MHz FSB)
• 4GB System Memory
• Media Card Reader
• Wireless 802.11 b/g Card
• DVD/CD±R/RW Optical Drive - Plays and creates CDs and DVDs
• 15.6" Display
• Integrated Intel 4500 MHD Media Accelerator Graphics
• Built-in 1.3MP webcam
• Windows7Home Premium Operating System (64-bit)
• 6-cell Battery
• High Definition Audio 2.0
အပေါ်ဆုံးမှာက 2.2GHz Intel Pentium Dual Core T4400 Processor (1MB cache, 800MHz FSB)လို့ေ၇းထားတာက cpu speed ပါ။external cpu processor speed and internal processor speed ရှိပြီးသား ဆိုတာကိုသိပြီးသားလောက်တွေပါ။2.2GHz ဆိုတာက processor တစ်လုံးခု ဝင်းဒိုးသုံးတယ် ဖိုင်လ်တွေဖွင့်မယ် os system ပိုင်းတွေနဲ့ ရုံးသုံးတွေ ဖြစ်တဲ့ Microsoft word တွေစာစီစာရိုက်မယ် ဆိုတဲ့ ဝင်းဒိုး os system တွေရဲ့ အနှေးအမြန် application softwares များ download လုပ်မယ်။Installation လုပ်သုံးမယ် အဲ့လိုလုပ်ဆောင်မှုတွေက internal speed 2.2ghz နဲ့လုပ်ဆောင်တာပါ။External speed ဆိုတာက မမြင်ရတဲ့ cpu က hardware ပိုင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ အပို့အယူလုပ်မယ် data transfer လုပ်မယ်။ဥပမာ ဆိုရလျှင် cpu နဲ့ ram နဲ့ကြားမှာ s1 and s2 လို့ခေါ်တဲ့အကူ cache သိုလှောင်ငှာနတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့လို cache ကိုပို့ဆောင်ကူပြောင်း data tarnsfers လုပ်တာက external cpu speed ပါ။A++ ဦးဇော်လင်းစာအုပ် မှာရေးထားပါတယ်။T4400 ဆိုတာက series သတ်မှတ်ချက်ပါ။ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ series လိုက်၇ှိပါတယ်။ဥပမာ ဆိုပါတော့ T4400 ရှေ့မှာက T3300 series ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့ မပြောတက်ဘူးလေ။1MB cache ဆိုတာက အပေါ်ကကျွှန်တော်ပြောတဲ့ s1 s2 cache ဆိုတာက။Ram and cpu ကြားမှာ သိုလှောင်ငှာနတစ်ခုပဲလေ။ဒီကောင်က S ram လို့ခေါ်တယ်။ပြောချင်တာက ram ကမီးပျက်ရင် data and information လုပ်ဆောင်တာ ပျက်ပါတယ်။ဒီကောင်က မပျက်ပါဘူး။800MHz ဆိုတာက ခုနက s1 သို့ s2 ရဲ့ speed ပါ။Cpu နည်းတူ Mhz မီဂါဟက်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။အပေါ်က ပြောသလိုပဲ FSB ဆိုတာက external processor speed ပါ။နောင့်တစ်ချက်က proessor က intel company ကထုတ်တဲ့ Pentium ပင်တီယံ series က dual core ပါ။2.2 ghz dual core ဆိုတော့ processor internal speed ကိုသတ်မှတ် မယ်ဆိုလျှင် 4.4 ghz လို့သတ်မှတ်၇ပါတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ dual core ဆိုတာက processor နှစ်လုံးကို တနည်းဆိုရသော် တစ်လုံးတည်းအဖြစ်သို့ built in ထည့်သွင်းထားခြင်းပါ။Pentium4နောင့်ပိုင်းမှ intel company မှထွက်လာတာပါ။4GB System Memory ဆိုတာက လက်၇ှိ ram ရဲ့ Gb ပါ။၄ဂစ်လို့ဆိုရပါ့မယ်။System memory လို့ခေါ်ခေါ် main memory လို့ခေါ်ခေါ် ram လို့ခေါ်ခေါ်ကြိုက်တာခေါ်ပါ။ဒီကောင်ရဲ့ mhz အမြန်နူန်းဆိုတာ၇ှိပါတယ်။4GB ဆိုတာက ram တစ်ချောင်း data and information transfer process လုပ်ဆောင်တဲ့ memory chip အကျယ်အဝန်းပါ။
Media Card Reader ဆိုတာက ဒီလိုတော့ဖွင့်ပြထားပေးတယ် ကိုယ်တိုင်လည်း မသုံးဖူးဖုးဆိုတော့ ဖတ်ကြည့်ပေးပါRead and write files from your computer to different types of media. Files can be copied, edited, and stored, and can be transferred at speeds of up to 480Mbps - 40 times faster than with USB 1.1 media readers.
10/100 Ethernet ဆိုတာက လက်၇ှိ ကျွှန်တော်တို့ ဝင်းဒိုးတင်ဖို့ motherboard ခွေတစ်ခွေ read ဖတ်ပေးရပါတယ်။ဆိုလိုတာက အသံကြားလာဖို့ hd audo drive or ac 97 audio driver တစ်ခု ဖတ်ပေး၇ပါတယ်။ဒီ format style နှစ်မျိုးပဲလာတာပါ။အသံ driver နဲ့ပတ်သတ်လို့ read လုပ်ပီးမှ ကိုယ့် motherboard audio driver နဲ့ကိုက်သွားလျှင် အသံလာတာပါ။ပြီးတော့ onboard graphic သမားများ ဆိုလိုတာက ကိုယ့် motherboard မှာ buy ကတည်းက built in graphic နောင့်ပိုင်း motherboard များမှာ graphic onboard များထည့်သွင်း လေ့ရှိပါတယ်။ခုဆို 128 mb လောက်ထိကိုပါနေပါပီ။On board built in ပါလာသော graphic ပါလာသော သူများအဖို့ graphic driver ကို mother board driver ခွေကနေ ဖတ်ပေးရတာပါ။ကိုယ်တိုင် AGP slot များမှာ graphic ကဒ်များတပ်ဆင်လျှင်တော့ graphic ကဒ်နဲ့အတူ graphic driver ခွေကိုဖတ်ပေးပါ။နောင့်တစ်ခုက window xp သမားများ အပေါ်က motherboard driver များကိုဖတ်ပေးရတာပါ။os7သမားများကတော့မလိုလောက်ပါဘူး။ဝင်းဒိုးတင်ပြီးတာနဲ့ auto driver များဖတ်ပေးတာ သိပြီးသားလောက်တွေပါ။လက်၇ှိ internet ကြိုးနဲ့သုံးသူများ Ethernet driver များဖတ်ပေးရတာပါ။ဒါဆို Ethernet ဆိုတာဘာလည်း ဆိုတာ သဘောပေါက်လောက်ပီးဖြစ်မှာပါ။
Wireless 802.11 b/g Card အပေါ်ကပြောသလိုပဲ ကြိုးနဲ့သို့တခြား Ethernet setting ပိုင်တွေနဲ့ network ချိတ်ဆက်သုံးဖို့ဆိုတာ က Ethernet driver software ကို motherboard ခွေကနေဖတ်ပေးရတာပါ။ခု လက်တော့မှာက Wireless 802.11 b/g Card ကခုအပေါ်က လက်တော့မှာက built in laptop hardware ပိုင်းမှာထည့်ပေးထားတာပါ။အဲ့အတွက်လည်းပစ္စည်း laptop နဲ့အတူ Wire less driver ခွေတစ်ခွေပါလာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာက net ကို wire less လွှင့်ပေးပြီး net work sharing လုပ်ပီး အသုံးပြုခြင်းပါ။
320GB Hard Drive လို့ရေးထားတော့ hard disk က sata hardisk or ide hardisk or scsi hardisk လို့တော့မရေးပြထားတော့ များသောအားဖြင့် laptop hardisk များဟာ သေသလိုဖြစ်သလို sata hardisk serial cable များနဲ့ data cable ချိတ်ဆက်မှုများပါတယ် မားသားဘုတ်နဲ့ 320 ဆိုတော့ data store ဝင်ဆံမှု များတယ်လို့တော့ ပြောရမယ်။ဟက်ဒစ်လည်ပတ်နူန်း rpm ကိုတော ချမပြပေးထားတော့မရေးပြတော့ဘူး ဟီး heeDVD/CD±R/RW Optical Drive - Plays and creates CDs and DVDs လို့ေ၇းထားတော့ dvd room ထက်တော့ သာပါတယ်။ဆိုလိုတာက r/w ပါတော့ cd ချပ်တွေ dvd ချပ်တွေကို buring and reading ဖတ်ပေးလို့ရပါတယ်။Rom ဆိုတာက သုံးရုံသက်သက်ပါ။Read and write လည်းလုပ်ဆောင်ပေးလို့ရမှာ မဟုတ်သလို အသုံးပြုလို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့။
15.6" Display ဆိုတော့ lap top screen အကျယ်အဝန်း 15 လက်မကျော်ကျော်လေးလို့ပြောလို့၇ပါတယ်။Display ဆိုတာက သတ်မှတ်ချက်ပါ။Display card ဆိုတာ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား အဲ့လိုသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါ။
ဒီအပေါ်ကဟာကိုတော့ စုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်။Integrated intel 4500 Mhd media accelerator graphic ဆိုတာက အဆိုပါ laptop နဲ့တူ intel company က ထုတ်ပေးတဲ့ graphic accelerator media card ပါလာခြင်းကိုခေါ်ဆိုတာပါ။ဘယ်လောက် gb လောက်သိခြင်ရင်တော့ ဆိုင်မှာ မဝယ်ခင် display properties မှာ မသိမသာလေး ကြည့်ပေါ့နော်။Built in 1.3mp web cam ကတော့ လက်တော့အများစုမှာ ဝက်ကန်ပါပြီး သားတွေပါ။အပိုထည့်ထားတယ်ဆိုရမှာပဲ ဟီး လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်။ Windows7Home Premium Operating System (64-bit) ဆိုတာက ဒီလက်တော့လ်မှာ window7home premium ဝင်းဒိုးတင်ထားပေးထားတာပါ။Home premium ဆိုတာက window os7ကို microsoft company ကနေ အိမ်သုံးဆိုပြီး produce ထုတ်လိုက်တာပါ။window7professtional ဆိုတာကြားဖူးလား။ဒီကောင့်အရှေ့မှာ ထွက်လာတဲ့ version home သုံးပေါ့။Professtional ဆိုတာက မိုက်ကရိုဆော့လ် company ကနေ လုံးဝကို purely စိတ်ချရပီ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းခွင်သုံးသုံး စိတ်ချစွာ လုံခြုံစွာ security ကောင်းလာပီဆိုမှ professtional ဆိုပြီး ထုတ်လိုက်တာပါ။Utimate ဆိုတာက အဲ့လို professtional ကိုထပ်ပြီး အလှထပ်ဆင်ပြီးထွက်တာပါ။6 cell battery ဆိုတာက လက်တော့ ဗို့စ်အားဝင်ဆံမှု လို့တော့ထင်ရတယ်။အဲ့ပိုင်းက လေ့လာမှုအားနည်းလို့ ဟီး။High Definition Audio 2.0 ဆိုတာက အဆိုပါ လက်တော့လ် motherboard က အသံ driver port လုပ်ဆောင်တာ high definition audio 2.0 နဲ့လုပ်ဆောင်တာပါ။အသံလာခြင်လို့ ac 97 driver ဖတ်ပြီးမှ အသံမလာဘူးလို့တော့ မပြောနဲ့ပေါ့နော်။ဒီလိုအချက်လက်တွေတော့ သိပြီးပြီ။၅ သိန်းကျော်လောက်ဆိုတော့ ဒီခတ်အနေထား လောက်ဆိုမပြောပလောက်ပါဘူး။Dual cord processor ဆိုတော့ နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လို os verison တင်သုံးမလည်း ကြိုက်တာ တင်သုံးပေါ့။နိုင်ပါတယ်။တန်ပါတယ်လို့တော့ ပြောရမှာပေါ့နော်။Dell company ဆိုတာ နာမည်ကြီး company series ထဲကတစ်ခုပါ။စိတ်ချပါ ဒါလောက်ဆိုတန်ပါတယ်။
မရှင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့ Gmail ကိုအပ်ပြီးတော့ထပ်မေးလို့ရပါတယ်နော်.....အကြံပေးမျှဝေခြင်းသာဖြင့်
ပါတယ်နော်.....ကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေစဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည့်စုံမှုမရှိသေးပါဘူး......
Posted by ဧရာညီနောင် at 9:20 PM
Toshiba အမျိုးအစားကလည်း Heat အရမ်းတတ်ပါတရ်...ဒီဇိုင်းကတော့ လှပါတယ်...အကြမ်းမခံပါဘူး
ဟုတ်တယ်ကိုရဲလေး ကျွန်တော် Toshiba အကြောင်းပြောဖို့ကျန်သွားတယ်.....အခုလိုထောက်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပဲနော်.........း)